Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Guriceel – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Guriceel
13th February 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Waxaa saakay degan xaaladda degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo shalay ay ka dhaceen dagaallo aan waxba la iskula harin oo u dhaxeeya ciidamada Dowladda iyo xoogagga Ahlu Sunna Waljameeca.
Wararka ayaa sheegaya in dhinacyada ku dagaalamaya degmada Guriceel ay weli ku sugan magaalada gudaheed iyo hareeraheeda, iyadoo labada dhinac ay sameynayaan dhaqdhqaaqyo ciidan.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in qoysaskii halkaasi degenaa ay bilaabeen inay isaga qaxaan, iyagoo u barakacay degaanada ku dhow dhow degmada Guriceel, inkasta oo degmadaasi ay gaareen guddi ka yimid magaalada Dhuusamareeb oo waanwaan ka bilaabay halkaasi.
Sheekh Xuseen Wardheere oo ka tirsan saraakiisha ciidamada Ahlu Sunna Waljameeca ayaa isagoo u waramayay warbaahinta gudaha waxa uu ku hanjabay in rabitaankooda oo kaliya uu ka hirgelayo degmada Guriceel.
“Degmada Guriceel iyo nawaaxigeeda waxaa ka soconaya oo kaliya rabitaanka Ahlu Sunna Waljameeca, mana ka hirgeli doonaan wax ka duwan himiladeena aan ku badbaadineyno dadka ku dhaqan gobolka Galgaduud” ayuu yiri Sheekh Xuseen Wardheere.
Dhinaca kale waxa uu sheegay inay geed gaaban iyo mid dheer u korayaan sidii loo badbaadin lahaa shacabka ku dhaqan degmada Guriceel oo uu sheegay inay horayba uga xoreeyeen gumeysiga iyo dhibaatadii uu ku hayay ururka Al-Shabaab.
Waxgarad iyo odayaal shir uga socdo magaalada Dhuusamareeb ayaa baaq nabadeed u diray dhinacyada ku dagaalamaya degmada Guriceel, iyagoona ka dalbaday inay joojiyaan dagaalka, isla markaana isugu yimaadaan miiska wadahadalka si loo dhameeyo colaadda ay dadka faraha badan ku geeriyoodeen.
Xoogaga Ahlusuna Waljamaaca oo markale soo ceshtay Guriceel
Somalia: Halane, the man who transformed financial system in Somalia